Fikradda kuleylka kuleylka iyo tikniyoolajiyadda, maxay kuleylintu kululaataa
Kuleylka kuleylka waa hab aan olol lahayn, oo aan lahayn xiriir kululayn kara una rogi kara qayb si hufan loo qeexay bir bir ah cherry ilbiriqsiyo ah. Marka talantaalliga ah ee qulqulaya qulqulaya is-beddelka, kala duwanaanshaha soo-gelinta elektromagnetic-ka ayaa la dejiyey hareeraha gariiradda, wareegaya hadda ( la kiciyay, hadda, eddy current) ayaa lagu soo saaray goobta shaqada (maaddada tabinta), kuleylka waxaa loo soo saaraa sida ay hadda u socoto qulqulatada ka soo horjeedka xasaasiyadda maaddada.
Kuleylka induction waa mid dhakhso ah, nadiif ah, oo ah qaab kuleyl aan nadiif ahayn oo loo isticmaali karo in lagu kululeeyo biraha ama lagu beddelo guryaha waxqabadka. Xarigga laftiisu ma kululaan karo oo saamaynta kuleylka ayaa gacanta lagu hayaa. Tikniyoolajiyadda adag ee gobolka ee transistor waxay ka dhigeysaa in kuleylka kuleylka aad u sahlan, kuleylka qiimaha wax ku oolka ah ee loogu talagalay codsiyada induction brazing, kuleylka kuleylka, qulqulka induction, yareyso ku habboon, induction forging iwm.
Qalabyada soo-saarista induction-ka ee sida saxda ah loo qaabeeyey oo leh awood xoog leh oo dabacsan is-beddelka soo-saarista waxay soo saartaa natiijooyinka kululaynta ee soo noqnoqda ee u gaarka ah codsiga la doonayo. Sahayda korantada soo-saarista ee loogu talagalay inay si sax ah u qiyaasto kuleylka maaddada oo ay uga jawaabto wax ka beddelashada alaabta inta lagu jiro wareegga kululaynta ayaa ka dhigaysa in lagu guuleysto astaamaha kuleylka kala duwan ee hal codsi kululeyn mid dhab ah.
Ujeedada kululaynta induction waxaa laga yaabaa inay adkaato qayb looga hortago xirashada; ka samee balaastigga birta ee loogu talagalay sameynta ama sameynta kuleylka kulul qaab qaab la doonayo; laba geesood ama laba iibiya; dhalaasho iyo isku dar walxaha ku jira aaladda kul-heer-kulka sareysa, taasoo suuragal ka dhigta matoorka diyaaradda; ama lambar kasta oo dalabyo kale ah.